IHE BAỊBỤL NA-AKỤZI: Jizọs katọrọ ndị ndú okpukpe e nwere n’oge ya n’ihi otú ha si nwee mmasị n’utu aha na otú ha si achọ ịbụ ndị a ma ama. O kwuru na ọ na-amasị ha “ịnọ n’oche dị elu n’oriri, ịnọ n’ihu oche n’ụlọ nzukọ, ị nara ekele n’ọma ahịa nakwa ka ndị mmadụ na-akpọ ha ndị nkuzi.” Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya, sị: “Ụnụ ekwela ka a na-akpọ ụnụ ndị nkuzi, n’ihina ụnụ nwere naanị otu onye nkuzi. Ụnụ niile bụkwa ụmụnne. Ụnụ akpọla onye ọbụla nna ụnụ n’elu ụwa a, n’ihina ụnụ nwere otu nna nke bi n’eluigwe.”—Matiu 23:1-10, Baịbụl Nsọ Nhazi Katọlik.
AJỤJỤ: Ọ̀ na-amasị ndị ndú nke okpukpe a ka a na-etu ha aha iji kwanyere ha ùgwù, hà na-achọkwa ịbụ ndị a ma ama n’obodo, ka hà na-erubere iwu Jizọs isi ma zere ime otú ahụ?
IHE BAỊBỤL NA-AKỤZI: “Apịrịla onwe gị arụsị ọ bụla, ma ọ bụ ihe nwere oyiyi nke a ga-achọta ụdị ya n’eluigwe, na n’okpuru eluigwe, ma ọ bụ nke a ga-achọta na mmiri n’okpuru ụwa. Akpọla isi ala nye ha ma ọ bụ fee ha ofufe.”—Ọpụpụ 20:4, 5, Baịbụlụ Nsọ nke International Bible Society.
AJỤJỤ: Okpukpe a ọ̀ na-erubere iwu doro anya Baịbụl nyere isi, nke bụ́ ka anyị zere iji ihe oyiyi na arụsị efe Chineke?
[Ihe odide gbatụrụ okpotokpo nke dị na peeji nke 9]
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Ezi Okpukpe Na-akụziri Ndị Òtù Ya Ịkwanyere Okwu Chineke Ùgwù